5 200 qaxooti ah ayaa Sweden soo gashay isbuucii hore | Somaliska
Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa shaacisay in isbuucii hore ay Sweden soo galeen qaxooti gaaraya 5 200 qof taasoo ah tiradii ugu badnayd ee abid soo gasha Sweden muddo isbuuc ah. Dadkaas qaxootinada dalbaday ayaa waxaa 2 648 ka soo jeedaan Syria, halka 700 ay ka yimaadeen Afghanistan iyo 532 oo Ciraaq ka timid. Inta kale ayaa ka soo jeeda wadamo kala duwan oo Soomaalia ku jidho.
Tirada dadka isku dhiibaya caruurta ayaa aad u korortay sidoo kale, iyadoo 923 qof ay isbuucii hore isku dhiibeen caruur-nimo. Dadka caruurta isku dhiibaya ayaa kala bar ka soo jeeda Afghanistan, iyadoo Soomaali ay yihiin 34 qof.
Qaxooti badan ayaa maalmihii la soo dhaafay ka soo gudbay xuduuda Denmark iyo Sweden iyadoo hada aysan dowlada Sweden eegeyn faraha qaxootiga ka yimaada Syria. Xitaa shirkada tareenada ee SJ ayaa joojisay waydiinta aqoonsiga si qaxootigu ay si xor ah ugu safraan tareenada.
Si kastab ha ahaatee, tirada qaxootiga soo galaya Sweden ayaan u dhawayn kuwa imaanaya Germany, halkaasoo isbuucii hore ay 10.000 qof ka badan isk dhiibeen hal maalin oo keliya.
2sano maxad war ka haysaa sxb
2 sano walaahi wali way Cakirantahay hanadow waliba Swedishkii oo helay Carab Tirada ka badatay oo dalkoodii soo Bur buriyay ilama aha in Somali ay waxooda hoos u eegi doonaan.
ka warama qof ka da’da yar ee udacwoonaya reerkiisa haddu uga xareeyo burundi yaa war ka haaya burundi
carabtii weey soo qaxeen walee. hada aniga SFI an dhigtaa, waxaan ismoodaa wadan carab inaan iskuulka kadhigto. 96% waa carab ardayda.
Waa dad soo dhoweysanaya terrorist.
September 16, 2015 at 22:36
Kubada aduunka sanadba wadana qaada sanadkan iyo kan ku xigaba waxa iskaleh nimanki diracyada weena syriya iyo xoga eratherian ah anaga hadan nahay somali warega 1kowad baan ku harnay isi soo adkeya oo sheka soconesa kena aye nagu tieahden laanta socdalka
Aniga waxaan La yabaa dadka 2 sano kaga dhagtay dhulgariir baa dhacay hadii la dhaho waxey so qorayaan 2 sano maxaa war ah kkkkk 2 sano ku miir beleen lol
September 17, 2015 at 00:31
huuno beelo anigo fikrada ra’yigaaga sharfaya haddana waxaan ku arkaa qof walbo inu dantiisa iyo wixi dan u ah uu ku mashquulo, ka raadiyana aqbaar wacan,adigu haddey reee ama seygaaga uu ku joogo walal dad bey inta ka maqanyihiiiin, waan dareemaya inaadan dhibta dadkaasi oo an ka mid ahay aadan dareemeyn adigu ma adaama aadan ogeyn inta ey la egtahay dhibtaasi marka huuno aad ban ku salaamaya waxana rajeynayaa inadan si xun ii fahmin
September 17, 2015 at 02:05
Nasro Ahmed Sorry Sharafeey Allaha isku So celiyo Qooysaska Somaliyed iyo Umada muslimiinta intii kala maqan Wan kaftamayay wll mar kale iga Raali Noqo wll waan dareemi karaa dhibtaaz😥
Beelo wlh runta ayaa kahadashay aniga aya yabo mar marka qaar waxa mesha kuqoran iyo waxa ay kahadlayaan kkkkkkkkkkkkkkkk
Maandeeq aamus nacasyahay calooshaada xashiishbaa ka buuxee, dadka dhiban miyaad ku jees jeesaysaa, laxaybaad Tahaye aamus shame on you hadaad nin tahay iyo hadaad naag tahayba edeb ma lihide.
Asc waxan ku faraxasaey ina coda ka dhiibto radiyo somaliska